PSD : hanamafy ny "politikan'ny kibo" manomboka izao (+vidéo)
Mitady ainga vao ny « Parti Social Democrate » fantatry ny maro amin’ny anarana hoe PSD ka nanapa-kevitra ny hanova ny rafitra fifampitondrana sy ny loko famantarana azy. Fetsion Rakoto Andrianirina no napetraky ny filoham-boninahitra Ruffine Tsiranana ho Filoha mpanatanteraka miara-mitantana aminy. Araka ny fanazavana nentin’ny filoham-boninahitra dia antenaina hitondra aina vao ho an’ny antoko ny traikefa ananan’ny filoha mpanantanteraka vaovao. Namafisin’i Fetison tao anaty lahateniny kosa fa tsy mivaona amin’ny foto-kevitra efa nijoroany hatrizay ny antoko PSD dia ny hampanjakana ny demokrasia ary ny « politikan’ny kibo ».
Mirona kokoa amin’ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ny tanjon’ny antoko saingy tsy manao ambanin-javatra ny fiezahana ny hahita vahaolana amin’ny krizy izay lalovan’ny Firenena. Mijanona tanteraka ao anatin’ny Ankolafy RAVALOMANANA ny PSD, araka ny fanazavana hatrany, ary manaraka manontolo ny toro-mariky ny Ankolafy amin’ny raharaha politika rehetra indrindra fa mikasika ny fifidianana. « Fongary ny lasa hanatsarana ny hoavy » io no teny filamatra nentin’ny mpikatroka nanainga izao fanovana izao ka na niova aza ny sary famantarana dia notazomina avokoa ny loko maha-PSD ny PSD sy ny famantarana ny antoko sosialista rehetra manerana ny tany. Araka ny fanzavana hatrany dia miezaka ny ho antokon’ny firaisan-kina sy mpampivondrona ny PSD mba hahitana taratra izany soatoavina Malagasy izany. Fanamby ho an’ny birao mpitantana vaovao arak’izany ny hanatanterahana ny zaikabe isam-paritra sy nasionaly ho an’ny PSD amin’ny endriny vaovao.
Fitoniana politika : ireo be galona no tena sakana (+vidéo)
Fanontaniana tokana momba ny Filoha RAVALOMANANA no napetraky ny SADC tamin’ireo jeneraly telo mirahalahy niaraka tamin’i tgv tany Maputo : « inona no mahatonga anareo hanakana ny fiverenany sy ny filatsahany ? ». Tsy nazahoam-baliny izany tany an-toerana satria tsy sahy miady hevitra rehefa manoloana ireo mpikambana ao amin’ny SADC ary tsy mitombona rahateo ny antony anaovana izany rehetra izany. Rehefa tonga eto Madagasikara kosa anefa izy ireo dia avo vava « ohatra ny tsy ho faty » hoy ny fitenenana.
Nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety izay nataon’ireo tomponandraikitra ambony ao amin’ny tafika dia nilaza mazava ny Jly Ranto Rabarisoa fa « tsy azo eritreretina » ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA « satria efa hitantsika ny zavatra efa nataony ary mbola tsy eto izy dia efa manakorontana sahady » hoy hatrany ity lehiben’ny CMDN ity. Mazava izany fa ireto manamboninahitra ambony mahazo ranondranony amin’Ambohitsorohitra ireto mihitsy no manakana ny tsy hisian’ny fitoniana eto Madagasikara.
« Miaro ny vahoaka sy ny fananany » ???
Vao andro vitsy lasa anefa izao no notetezin’ny dahalo ny tanàna maro tany amin’ny Faritra Androy ary dia maherin’ny 2000 ny omby lsan’izy ireo. Midika izany fa lasan-ko vavany sisa ny fiarovana ny olona sy ny fananany. Ny fanompoana ny mpanongam-panjakana no tena imasoan’ny lehibe ao anatin’ny foloalindahy hany ka tsy mahavita ny asany an-tsakany sy an-davany ireo eo ambany fifehezana. Efa nampahatsiahivina hatrany fa ny tsy fisian’ny fitoniana ara-politika dia mitarika fikorontanan ara-tsosialy satria tsy mandeha amin’ny laoniny ny fitantanan-draharaha.
Raha mahazo faka anefa io tsy fandriam-pahalemana ateraky ny tsy fahaiza-mitantana io dia sanatria ho toa an’i Somalia i Madagasikara ka ny hery avy any ivelany tokoa no hametraka ny mpitondra sy hamboly fikorontanana. Izany rehetra izany no mety hitranga rahatoa ka ny hanenjika olona iray lalandava no anton’asan’izay mba nahazo grady ambony fa tsy ny hikatsaka izay hampilamina ny Firenena iray manontolo.
Maputo : jeneraly telo be izao no miaro an-dRajoelina
Fantatra ankehitriny ny delegasiona miara-dia amin’ny filohan’ny mpanongam-panjakana hiatrika ireo Filoham-pirenena mpikambana ao amin’ny SADC atsy Maputo manomboka androany. Nahazo fanasana ihany koa mantsy i tgv ka ankoatra an’i Ratsirahonana sy i Annick Rajaona dia isan’ny miaraka aminy hiaro ny rambony tsy ho tapaka any ireto manambonihitra jeneraly ireto : Ranto RABARISOA, filohan’ny CMDN ; RANDRIANAZARY sekreteram-panjakana misahana ny zandarimariam-pirenena ary Richard « Baomba », lehiben’ny CIRGN.
Mazava hoazy fa mbola hanamafy ny hevitra notohan’izy ireo nandritra ny fihaonany tamin’i Fransman no tena antondian’ireto be galona ireto any Mozambika. Nandritra io dinika niaraka tamin’ny iraky ny SADC io mantsy dia nataon’ireto manambonihaitra ireto litania hoe « Mr. RAVALOMANANA can’t come back ». Nahasorena an’i Fransman sy ny mpiara-miasa aminy izany satria na dia efa zavatra hafa aza no noresahina tamin’ireto be galona ireto dia izany tsy fankasitrahana ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA izany hatrany no nasesiny. Izy ireo rahateo angamba tsy havanana amin’ny fiteny anglisy ka toa mihanahana tamin’ny ankamaroan’ny fotoana adin’ny dimy nihaonan’ny roa tonta. Voamariky ny mpiara-miasa amin’ny SADC sasantsasany koa fa rehefa naroso manoloana azy ireo ny raki-kevitra tokony nitarihana ny fihaonana dia nampiasa « google traduction » tamin’ny finday teny am-pelatanany ireto manamboninahitra ambony Malagasy ireto. Inona ary izany no hataon-dry « Baomba » sy ny namany any Maputo ? Mazava fa ilay litania efa natao tsianjery etsy ambony no haverimberina ka na hanontany ny fahasalamany aza ireo mpizaika any dia ho valiany hoe « Mr. RAVALOMANANA can’t come back » !
Teti-dratsin’ny minitra farany :
Raha ny tsilian-tsofina mandeha amin’izao fotoana dia hanao izay tsy hahafahan’ny vahoaka Malagasy miaro ny Filoha RAVALOMANANA ny FATE rehefa tena tsy afa-miala amin’ny fiverenany an-tanindrazana. Nialohan’ny nihazoana an’i Mozambika mantsy dia fantatra fa nandalo tao Morondava i tgv sy ny mpanara-dia azy. Ny tetikady dia ny handefasana ny fiaramanidina mitondra ny Filoha RAVALOMANANA hiantsona any Morondava ary any izy no ho samborina ka nametrapetraka ny hanatanterahana izany no anton’ny fandalovan’izy ireo tany an-drenivohitr’i Menabe.
« Sommet des chefs d’Etat »Maputo-Mozambique : Nahazo fanasana ny filoha Ravalomanana
Hotontosaina ny 16 sy 17 Aogositra ho avy izao any Maputo-Mozambique ny fivoriam-ben’ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana eo anivon’ny Sadc. Fantatra izao, araka ny fanasana ofisialy avy amin’ny Dr Salomao Tomaz, sekretera-panatanteraka eo anivon’ny Sadc, fa dia hiatrika izany fihaonana izany ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana. Zava-dehibe ho an’ny firenena Malagasy moa ity fanasana ity. Tsara ny mampahatsiahy, fa isan’ireo olona tsongon’olom-bolo eo anivon’ny vondrona afrikana sy ny Sadc ary mitondra avo ny faneva ny Madagasikara eo anatrehan’izao tontolo izao ny filoha Ravalomanana. Raha tsiahivina dia isan’ireo nasaina manokana ihany koa ny tenany nandritra ny fivorian’ny vondrona afrikana, natao tany Addis-Abeba farany teo.
Fanazavan'i Zafilahy Stanislas :
INVITATION_Pdt_RAVALOMANANA.pdf 125.97 Ko
Iraky ny SADC : hanao tatitra « indray » aloha i Fransman (+vidéos)
Telo andro no naharetan’ny dian’ny iraky ny SADC teto Madagasikara tamin’ity indray mitoraka ity. Ankoatr’ireo hery politika isankarazany dia isan’ny tena niresaka maharitra tamin’i Marius Fransman sy ny namany ny avy amin’ny foloalindahy satria dia naharitra ora dimy tsy ankiato izany omaly atoandro. Raha ny tafa nataon’ny mpitarika ny delegasiona tamin’ny mpanao gazety kosa dia nizara telo mazava tsara ny fanagonan-kevitra natao tamin’ireo nihaona tamin’izy ireo. Ny voalohany dia mikasika indrindra ny tetiandrom-pifidianana natolotry ny CENI-T, faharoa momba ny filatsahan’ny Filoha RAVALOMANANA sy i Rajoelina ho fidiana ho Filoham-pirenena ary farany mikasika indrindra ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA eto an-tanindrazana.
Sary Hotel Colbert
Araka ny nambaran’i Fransman dia nitovy tanteraka ny hevitra teo amin’ny tapany voalohany . Ny faharoa sy ny fahatelo kosa no nipoiran’ny fahasamihafana saingy niraisan’ny rehetra hatrany ny fitandroana ny hisian’ny fitoniana sy ny filamiana amin’ny fanapahan-kevitra rehetra izay tsy maintsy horaisina. Nomarihin’ity Ministra lefitra Afrikana Tatsimo ity fa izao iraka izao no natao dia noho ny fahatsapan’ny SADC sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa mahakasika ny Malagasy rehetra ny krizy politiika lalovan’i Madagasikara tao anatin’izay telo taona mahery izay. Aorian’izao fanangonan-kevitra izao kosa anefa dia ny tatitra manoloana ny mpikambana ao amin’ny SADC no dingana hatrehin’ny mpanelanelana. Izany dia hatao mandritran’ny fivoriam-be hatao ao Maputo Mozambika ny 17 sy 18 Aogositra izao. Hatreto aloha izany dia mihodikodina toa tandrimo eto ihany ny famahana ny olana. Ny diplomasia rahateo ela fiasa kokoa noho ny fandraisan’andraikitry ny olom-pirenena rehetra rehefa misy ny fiaraha-mientana. Dia « miandry fa gasy » izany hoy ny fitenin-jatovo !
Naneho ny fanohanany ny ezaka ataon'ny SADC ihany koa ny Ministry ny raharaham-bahiny avy atsy Seychelles izay firenena mitarika ny vondrona COI sady nampiantrano ny dinika indroa miantaona nataon'ny roa tonta farany teo:
SADC_PRESS_STATEMENT__120812.pdf 1.47 Mo
Madio, tsy misy pentina manoloana ny fitsarana ny Filoha RAVALOMANANA (+vidéos)
Voaporofo ara-taratasy androany fa madio ary tsy misy arakaraka manoloana ny lalàna ny Filoha RAVALOMANANA. « Casier judiciaire bulletin N°3 » misy sonian’ny fampanoavana sy ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana mazava tsara no milaza fa tsy mbola meloka manolaona ny fitsarana ny Filoham-pirenena. Tsy misy ady hevitra izany ny maha-sandoka ny didim-pitsarana iavoaka momba azy raha ny resaka 07 febroary fotsiny ohatra. Sandoka satria tsy mbola azo ampiharina noho ny antanan-tohatra fanafoanana rehetra tsy mbola nolalovan’ny fiaorvana.
Arak'izao porofo hita maso izao dia teti-dratsy politika entina handotoana ny anarany fotsiny ihany ny fanaparitahana ny vaovao momba ny saziny sy ny heloka vitany. Nataon’ny FATE izany mba hanomezana rariny ny fanonganam-panjakana izay nataony ka azahoany ny fankatoavan’ny vahoaka Malagasy.
Mbola vonona hidinika
Tsy sanatria manao amboletra hilatsaka ho fidiana ny Filoha RAVALOMANANA fa ny toe-javatra niainan’ny vahoaka Malagasy tao anatin’ny telo taona mihitsy no manosika azy ireo hitaky ny fiverenany eo amin’ny fitondrana. Fanajana ny zo fototra hana-tsafidy amin’ny hitondrana ny Fireneny rahateo ny famelana malalaka ny fahatanterahan’izany. Hatreto aloha dia tsy mahita fifanarahana politika, ankoatra ny tondro zotra, matotra sy ahitana lalana haingana ivoahana amin’ny krizy ny Ankolafy RAVALOMANANA. Izany indrindra no nanamafisan’izy ireo tamin’ny alalan’ny fanambarana ny antso ho an’ny finiavan’ny tsirairay hanatanteraka azy io. Efa notakiana hatrizay ny voarakitra ao anatin’ny andiny faha-16, 17 ary faha-20 ary tonga lalàna izany ankehitriny ka tokony tanterahina haingana sy tsy misy fepetra. Izay indrindra no mahatonga ny Ankolafy manameloka ny fanivaivana sy herisetra natao tamin’ny vadin’ny Filoha RAVALOMANANA sy ny vinatony raha efa tafiditra teto Madagasikara izy mianaka ny zoma 27 jolay teo. Isan’ny fanajana ny zon’olombelona ny famelana azy hivezivezy ao amin’ny fireneny ary ny tondro zotra rahateo dia mametraka ho ambony indrindra ny fanajana ny zo fototry ny tsirairay araka ny andininy faha-30. Noho ireo antony rehetra ireo ary dia mbola manamafy ny Ankolafy fa mamporisika ny hanohizana ny dinika amin’ny Filoha RAVALOMANANA sy ny mpitarika ny FATE. Ny Filoha rahateo dia vonona ny hiatrika izany, na dia ireny aza no nanaovana ny andefomandriny, satria mitana ny teny nomeny izy. Raha misy izany ny tsy fahatanaterahan’ny fitohizan’izany fihaonana izany dia tsy ho avy aminy velively.
Fanambarana amin'ny fiteny Malagasy :
Fanambarana amin'ny fiteny Frantsay :
FANAMBARANA_ANKOLAFY_RAVALOMANANA.pdf 1.22 Mo
DECLARATION_MOUVANCE_RAVALOMANANA.pdf 1.45 Mo
Fifidianana eto Madagasikara- Aleo ny vahoaka no hifidy izay tiany sady hitany mendrika hitondra an'i Madagasikara
Raha ny tetiandro navoakan’ny CENI-T io tolakandro io dia ny 08 Mey 2013 no hanatanterahana ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana Filoham-pirenena. Ny 03 jolay kosa no hanaovana ny fihodinana faharoa miaraka amin’ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny 23 Oktobra indray no iatrehana ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina isaky ny kaomina. Ny vaomiera mahaleotena mikarakara ny fifidianana (CENI-T) kosa dia mangataka avy hatrany ny hampitsaharana ny sazy ampiharina amin’i Madagasikara ary mitaky ny hamelana ny vahoaka hisafidy malalaka izay hitondra ny fanjakana .
Raha izao paipaika izao dia tsy maintsy tafaverina an-tanindrazana alohan’ny desambra 2012 ny Filoha RAVALOMANANA mba ho afaka ho fidiana ho Filoham-pirenena indray. Ny lalàm-pifidianana manko dia mamaritra fa mila monina eto an-tanindrazana enim-bolana farafahakeliny vao afaka mirotsaka ho fidiana ny olona iray. Tsara ho marihina fa io tetiandro eken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, izany hoe efa nahazo ny fankatoavana amin'izao tontolo izao. Ny 30 sy 31 Jolay teo mantsy dia nisy ny fivoriana niarahan'ny solontenan'ny vondrona eoropeana, vondrona afrikana, ny COI, ny OIF, ny firenena mikambana, nandinihana indrindra izay fotoana mahamety ny fifidianana eto Madagasikara. Fifidianana izay ho eken'ny rehetra, satria dia mangarahara. Ireo no fotoana tsapa fa hahatomombana ny fiomanana rehetra araka izany, na ny lisi-pifidianana izay tena mila fanavaozana izany, na ihany koa ny lafiny ara-politika. Hisy ato ato ny fivoriana iarahan'n kaomitin'ireo mpamatsy vola miaraka amin'ny CENI-T. Ny filohan'ity vaomiera ity anefa dia mangataka ny hamoahan'ny fanjakana ny didim-panjakana ahafahana manatanteraka ireo fifidianana ireo, fa indrindra fa ny teti-bola ilaina ho amin'izany.